မီးမီးခဲ့ရဲ႔အမွတ္တရသီခ်င္းေတြကိုရုိက္ကူးေရးလုပ္ဖို႔ ပရိတ္သတ္ေတြကိုအကူ အညီေတာင္းလိုက္တဲ့ အဆိုေတာ္မီးနုိ – Cele Snap
Galaxy Star သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများလာတဲ့ အဆိုတော်တစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မီးနိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အပြည့်အရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ မီးနိုတစ်ယောက် ကွယ်လွန်သူ အဆိုတော် မီးမီးခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရိုက်ကူးရေး တစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မီးနိုအခု မမီးမီးခဲ အမှတ်တရသီချင်း ရိုက်ကူးရေးလုပ် မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် အခုမီးနိုရိုက်ပြထားသလိုမျိုး ပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ဒီ Comment အောက်မှာ မန့်ပေးကြစေချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ RIP မီးမီးခဲ ၊ We Miss You ၊ See You Again MMK ၊ We Love You Mee Mee Khal ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေနဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ရိုက်ကူးပေးဖို့ လူမှုကွန်ရက်စ ာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ပို့ပေးတဲ့ပုံလေးတွေကို Music Video ထဲမှာ အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး မမီးမီးခဲကိုချစ်ပြီး မီးနိုကိုလဲချစ် တယ်ဆိုရင် ကူညီရိုက်ပို့ပေးကြပါဦးလို့ပရိသတ်တွေကို အကူညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ မီးမီးခဲ နဲ့ မီးနိုကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ကူညီပေးလိုက်ကြပါဦးနော် .
Galaxy Star သီခငြျးဆိုပွိုငျပှဲကနတေစျဆငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ လူသိမြားလာတဲ့ အဆိုတောျတစျတောျတစျယောကျဖွစျတဲ့ မီးနိုကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခစြျခငျမှုတှကေို အပွညျ့အရရှိထားတဲ့သူတစျယောကျဖွစျပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ မီးနိုတစျယောကျ ကှယျလှနျသူ အဆိုတောျ မီးမီးခဲနဲ့ပတျသကျပွီး ရိုကျကူးရေး တစျခုလုပျဖို့စီစဉျနတေယျလို့သိရပါတယျ ။
ပရိတျသတျကွီးရေ မီးနိုအခု မမီးမီးခဲ အမှတျတရသီခငြျး ရိုကျကူးရေးလုပျ မှာဖွစျပါတယျ။အဲ့ဒီအတှကျ အခုမီးနိုရိုကျပွထားသလိုမြိုး ပရိသတျကွီးကိုယျတိုငျရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးတှေ ကို ဒီ Comment အောကျမှာ မနျ့ပေးကွစခေငြျပါတယျ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ RIP မီးမီးခဲ ၊ We Miss You ၊ See You Again MMK ၊ We Love You Mee Mee Khal ဆိုတဲ့စာသားလေးတှနေဲ့ ပုံလေးတှေ ကို ရိုကျကူးပေးဖို့ လူမှုကှနျရကျစ ာမကြျနှာကနတေဆငျ့ ပရိသတျတှကေို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ ။
ပို့ပေးတဲ့ပုံလေးတှကေို Music Video ထဲမှာ အသုံးပွုသှားမှာဖွစျပွီး မမီးမီးခဲကိုခစြျပွီး မီးနိုကိုလဲခစြျ တယျဆိုရငျ ကူညီရိုကျပို့ပေးကွပါဦးလို့ပရိသတျတှကေို အကူညီတောငျးခံခဲ့တာဖွစျပါတယျ ။ မီးမီးခဲ နဲ့ မီးနိုကို ခစြျတဲ့ ပရိသတျကွီးကလညျး ကူညီပေးလိုကျကွပါဦးနောျ .
အရမ္းနီးကပ္လြန္းေနတဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခ်ိဴ႔ ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကို အသည္းယားေစခဲ့တဲ့ ေကာင္းျမတ္စံနဲ့ နန္းဆုရတီစိုးတို့ရဲ့ ခရစၥမတ္ညသီခ်င္း MV မွျမင္ကြင္းေလး…